Nzọụkwụ 4 iji mee ka nlebara anya ahịa gị na 2019 | Martech Zone
Nzọụkwụ 4 iji mee ka nlekwasị anya na ahịa gị na 2019
Tọzdee, Eprel 4, 2019 Tọzdee, Eprel 4, 2019 Joe Andrews
Ka anyị na-agbago maka afọ 2019 na-aga nke ọma, otu isiokwu nke dị n'uche maka ọtụtụ ndị isi ahịa na ahịa B2B nke m kwuru okwu bụ atụmatụ ahịa ha-ahịa. Ihe ọ na-agbada maka ọtụtụ ndị isi bụ ma ụlọ ọrụ ha na-elekwasị anya na ngalaba ahịa ziri ezi yana etu ha siri dị njikere ime atụmatụ ha.
Gịnị kpatara nke a? Inwe usoro siri ike ịga-ahịa nwere njikọ chiri anya na arụmọrụ enweta ego. Na nke ikpeazu anyi nnyocha e merenke 500 ọkachamara na ahịa na ahịa, ụlọ ọrụ ndị gafere ha ego ha lekwasịrị anya na afọ gara aga bụ 5.3x yikarịrị ka ha ga-enwe usoro ịga ahịa ahịa dị elu ebe a na-akọwapụta ahịa ha niile nwere ike ịkọwa nke ọma, ndị ahịa na ndị ahịa na-eme nke ọma na ụlọ ọrụ leverage mmemme dị ka ahịa azụmaahịa (ABM) nke akaụntụ na-echekwa ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Maka CMOs, ndị isi nke atụmatụ, na ndị otu ọgbọ chọrọ, ntụkwasị obi na atụmatụ 2019 pụtara ịnweta atụmatụ ezubere iche maka akaụntụ abụọ yana isi ịzụta mmadụ n'ime. Ọ pụtakwara inwe usoro mmemme azụmaahịa ziri ezi nke na-agụnye mkpọsa gafee ọwa dị iche iche na ụzọ iji tinye aka nke ọma ma kwaga ha na olulu ahụ.
Maka CROs na isi nke arụmọrụ ahịa, nke a pụtara atụmatụ pụtara ihe gburugburu mpaghara ahịa na aha ndị akpọrọ aha, na-elekwasị anya n'ịhụ 1. ohere ndị a na-achụ bụ ohere kachasị dị ịtụgharị iji nweta ego na 2. enwere oke iburu reps nwere ikike iji jee ozi ndị ahụ, ma, ọzọ, a na-ekesa ha n'ụzọ ziri ezi n'etiti oke ndị na-ebu ndị ọzọ.
Mepụta na itinye usoro ihe ịga nke ọma na-aga nke ọma abụghị obere ihe. Dịka data silos, usoro ntuziaka, na data ruru unyi na-enwe ihe ịga nke ọma. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịkọwapụta ihe ezigbo profaịlụ ndị ahịa ha (ICP) dị ka ha ma nwee echiche nke ahịa ha zuru ezu (TAM) mana data nwere ike ịnọdụ ala na mpempe akwụkwọ na ndị isi na otu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ma aghọtaghị ya nke ọma, ma ya fọdụ a na-ahụ anya, maka ndị na-enweta ego n'ihu. Ndị otu ọrụ na-agbasi mbọ ike iji debe usoro data dị ọcha na nke ziri ezi na ndị nọ n'ime TAM, na-ebute mpaghara ahịa kachasị mma. Nwepụta arụmọrụ megide atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ siri ike. Usoro mgbasa ozi nke ọ bụla, dị ka nzaghachi email, na-egosi akụkụ nke eserese mana egosighi akụkọ niile banyere arụmọrụ ha nwetara na ahịa ịbanye na ICP na ngalaba achọrọ. Yabụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-efunahụ ohere iji nweta ego na uto.
InsideView tinyere obi na ntinye ahia a ma wuo injin mkpebi ahịa nke anyị malitere n'afọ gara aga, akpọrọ InsideNwee Apex.O nyeere ọtụtụ ndị ahịa aka dịka Castlight Health, Host Analytics, Salesforce, na Splunk na-akọwapụta ngalaba ziri ezi na akụkọ olile anya iji meziwanye ego ha ga-enweta ma tụọ ọganihu ka ha na-eto.
Ndị a bụ usoro 4 iji nyere gị aka ịme ka nlebara anya ahịa gị maka 2019, yana ndụmọdụ nduzi nke otu InsideView Apex nwere ike isi nyere aka:
1. Kọwaa (ma na-enye ume ọhụrụ) ICP gị na TAM dịka ha bụ ntọala iji gaa ahịa ịga nke ọma
Akwụkwọ ozi ndị a dị mkpirikpi dị mkpa iji kọwaa atụmatụ ịga ahịa ahịa B2 na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị akọwabeghị ezigbo profaịlụ ndị ahịa ya (ICP) na ahịa ya zuru ezu (TAM), ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị afọ ole na ole kemgbe enyochare ya, nke a bụ ebe ị kwesịrị ịmalite. Companieslọ ọrụ ndị isi na-enyocha ha mgbe niile, mana ihe na-erughị ọkara nke ụlọ ọrụ (47% dị ka nyocha anyị) na-eme ya mgbe niile. Nke a ga-aga n'ihu bụrụ isi ihe ekwusiri ike ruo mgbe ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enyocha ICP na TAM ha oge niile.
InsideView Apex na-enyere gị aka ịkọwapụta ezigbo profaịlụ onye ahịa gị (ICP) site na iji ọkachamara dị mfe, jiri anya nke uche hụ akụkụ ọhụrụ ma ọ bụ n'akụkụ dị nso ma mee nyocha "ọ bụrụ na" iji mee ka ebumnuche gị dịkwuo elu. Maapụ Apex maaahịa onye ahịa gị dị ugbu a yana data atụmanya megide data InsideView nke dị na mpụga iji ghọta ma tụọ oke ahịa gị (TAM) zuru oke. Ọ na - enye gị ohere nyochaa ntinye ahịa gị, hụ ohere oghere ọcha, na mbupụ akaụntụ ọhụrụ na kọntaktị iji mezuo mgbasa ozi na mgbasa ozi ezubere iche.
Ọnụ ọgụgụ: InsideView Apex nwere kensinammuo ICP na TAM ọkachamara
2. Malite iji tụọ arụmọrụ mmiri dị na ngalaba ahịa ebumnuche
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụle arụmọrụ zuru oke taa (yabụ na-eduga ohere iji nweta ego emechiri emechi) nke dị mma! Mana otutu adighi njikere ichota oru maka uzo ha nke mejuputara TAM. N'iji arụmọrụ gafee akụkụ ahịa bụ isi ihe iji mee ka ICP na TAM gị dị ọcha (# 1 n'elu). Ọ bụrụ na mmụba dị ka oge ịre ahịa ma ọ bụ bute ohere ịtụgharị ohere dị mkpa maka azụmaahịa gị, ọ gaghị adị mma ịnwe ike ịlele ma tunyere ihe metric ahụ gafere ngalaba abụọ dị iche iche, dịka ICP na ndị na-abụghị ICP, ma ọ bụ Akụkụ ICP A na nke ICP nke B? Ọ dị mfe ịghọta mana nke a siri ike taa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na profaịlụ ICP ha na data TAM na-efu efu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ka nwere ike ibi na sistemụ siledes nke siri ike ịgbakọta iji nweta ụzọ ndu-na-ego arụmọrụ ngosi. Nzọụkwụ dị mma iji nwee ọganihu ebe a bụ ịkọ akụkọ na iduga na CRM na azụmaahịa azụmaahịa site na nkebi ka ị wee nwee ike bido kesaa mkpesa arụmọrụ gị.
InsideView Apex na-enyere aka nyochaa ogo nke ndu na ohere megide ahịa ndị ebumnuche, yabụ ndị isi ahịa nwere ike ikpebi ma ha na-elekwasị anya n'ahịa ziri ezi, ma ọ bụ na ha kwesịrị ịgbanwe mgbado ha na ngalaba na-arụ ọrụ dị elu iji nwekwuo ego. Kama iji aka nyochaa na ntanetị, Apex na-enye otu ebe maka otu ndị na-enweta ego iji nweta nghọta azụmaahịa ma mee ihe iji bugharịa azụmaahịa ha.
Nyocha: InsideView Apex na nchịkọta nchịkọta zuru oke
3. Mmezi ahịa na ahịa otu na plan, data, metrics na-ekwurịta okwu na nghọta na-arụpụta
A na - ahazigharị ndị na - ere ahịa na azụmaahịa ahịa n'ihi ọtụtụ ihe - dabere n'ọmụmụ ihe anyị, ihe atọ kachasị na - akpata bụ enweghị data ziri ezi na akaụntụ na atụmanya ebumnuche, nkwukọrịta, na ndị otu na-atụle usoro dị iche iche. Enwere ụfọdụ usoro dị mfe ma dịkwa mfe iji gwọọ nke a. Nke mbu, hazie otu na otu usoro metara. O nwere ike bụrụ ezighi ezi iji tụọ arụmọrụ ahịa na ntinye akwụkwọ emechiri emechi ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ya dị n'aka aka, mana ọ dị mma ịnweta akara ahịa maka ntinye pipeline maka ohere ndị ahịa nabatara. Anyị na-eme nke a na InsideView na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị isi na nyocha anyị mere nke a.
Nke abuo, atumatu ma mezuo usoro mgbasa ozi ahia na ahia. Gịnị ka nke ahụ pụtara n’ezie? Kpọọ ha ka ha hazie nzukọ. Na-edozi nsụgharị nke ahịa na ịzụ ahịa ahịa (metụrụ) - lee ihe atụ n'okpuru. Kekọrịta nsonaazụ mgbasa ozi. Na InsideView, anyị na-agba nzukọ mmezi ebe anyị na-egwu n'ime arụmọrụ mkpọsa ma tinye nzaghachi ahịa. Ọ na-eme ntụkwasị obi na imekọ ihe ọnụ.
Nyocha: Atụmatụ igbu mkpọsa ahịa na ahịa ya
InsideView Apex na-eme ka ndị otu na-enweta ego wee kwụsị ohere kachasị mma site na iwepụ ụdị ihe ahụ, yabụ ị nwere ike:
Wụpụta ahịa dabere na akaụntụ (ABM) depụtara nke na-elekwasị anya n'ahịa na ire ahịa na akaụntụ mbụ kachasị mkpa.
Kpido akaụntụ ezubere iche ma na-eduga n'ime ọrụ ahịa na ahịa gị iji kwado ndị otu ị na-enweta ego na atụmatụ gị.
Kpughee ihe ndekọ ndị ọzọ yiri-nke yiri nke dakọtara na njirimara nke ICP gị, na-agbatị usoro ịkọ amụma nke InsideView nke AI.
Nye ntuziaka na omume akwadoro maka ABM ọ bụla, ICP, ma ọ bụ ahịa ahịa iji chụọ nsonaazụ chọrọ.
Nyocha: InsideView Apex na-ebupụta amụma ndị dabeere na AI nke akaụntụ kachasị mma
N'ikpeazụ, hụ na data ziri ezi ka ị nwee ike itinye aka na akaụntụ ziri ezi na ndị mmadụ itinye aka na ya site na ịdebanye usoro njikwa data akọwapụtara n'okpuru.
4. Mejuputa ma obu meziwanye usoro njikwa data ndi ahia gi
Ihe dị oke mkpa chọrọ na ịdabere na ịkọwapụta atụmatụ ị na-aga ahịa bụ ịdị ọcha data, ma hụ na ndị ahịa gị na data atụmanya dị ọcha ma zie ezi ga-emekwa ka ire ahịa na ịzụ ahịa ka mma maka akara ngosi # 3 n'elu. Na InsideView, anyị na-ejikarị usoro 5-arụ ọrụ maka ijikwa ịdị ọcha data, nke na-ekpuchi:
Ardihazi usoro data iji dozie njehie ntinye data na enweghị nkwekọrịta na-eduga na ndekọ abụọ
Nhicha megide otu data data tụkwasịrị obi iji hụ na edozi ihe na-adịghị mma n'oge ndabere
De-duping iji wepu mmezighari ihe ndi ozo ma hazie ha site na udi ihe - dika ndu, ihe ndekọ
Inyekwu ihe omuma na - efu - dịka ntanetị na - abata na ntanetị na - eduga gị ka ị nwee ike ibute ụzọ wee dọọ ha n’aka onye ahịa ziri ezi
Kwado ọrụ na adreesị email maka mgbasa ozi ọpụpụ
InsideView ngwọta njikwa data na-enye ụzọ dị mfe iji dozie ịdị ọcha data, na-eme ka ndekọ ndị na-ezughị ezu, ma gosipụta ozi kọntaktị iji melite irè mkpọsa.
Mekọrịta nlebara anya ahịa gị na 2019 nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka ịbawanye ogo ya ma merie ebumnuche ego. Mana usoro ịkọwapụta na imezu atụmatụ GTM gị na-achọ mgbalị ma chọọ ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa. Ọ bụrụ n’ị na-achọ ezigbo ebe ị ga-ebido, tụlee itinye atụmatụ a ụzọ anọ ma mee ka m mara etu o si aga. Ọ ga-amasị anyị inyere gị aka. Lee ụfọdụ ihe enyemaka iji nyere gị aka ịmalite:
ebook: The Data dị ọcha
ebook: You Maara Aha Gị Achọpụta Ahịa?
Akwụkwọ: Iji Usoro Dabere na Usoro iji Jikọta Ahịa & Ahịa
Joe Andrews bụ VP nke Ahịa na Ngwọta Ahịa na N'ime ma na-akwalite ego dị ka onye na-azụ ahịa ahịa na nnukwu ogo, ụlọ ọrụ teknụzụ na-akpaghasị afọ 20 +. Na InsideView, Joe na-eduzi atụmatụ zuru ụwa ọnụ, ịhazi na mwepụta nke ngwaahịa ọhụrụ na ngalaba ahịa. Na mbu Joe nwere ọnọdụ iduzi azụmaahịa na Zuora, VMware, Intuit na iMarket Inc. (ụlọ ọrụ D&B). Nwere ike soro Joe na Twitter na LinkedIn.
Fivezọ ise iji kwalite egwuregwu ọdịnaya gị
Kwụsị minglọ ọrụ Shams na-akwụ ụgwọ na Social Media na Ahịa Ọdịnaya